Maitiro ekuita iyo Danieri Kurumidza ▷ ➡️ Tsvaga Pamhepo ▷ ➡️
Maitiro Ekutsanya kwaDaniel. Kuti uite kutsanya kwaDaniel, zvinodikanwa kuti utsanye zvishoma, uchidzivirira kudya zvinhu zvinonaka kwauri. Chinangwa ndechekuve nekudyidzana kwakawanda naMwari, kupa chibayiro chekudya kwechinguva. Kutsanya kwaDaniel kunogona kureba kupfuura kutsanya kuzere kubva kuchikafu.
Iyo Daniel Kutsvaga yakanaka kune avo vasingakwanise kurega zvachose kudya chero chikonzero. Inokurudzirwawo kune avo vanoda kutsanya kwenguva refu vasina kukanganisa hutano hwavo. Munhu anodya, asi anodzora chishuwo chake, achiisa Mwari pamusoro pemufaro wekudya chikafu chaanofarira.
Tevere isu ticha tsanangura kutsanya kwa daniel nenzira chaiyo nenzira imwechete iyo ivo vanotaura zvinyorwa zvebhaibheri. Totanga here?
1 Maitiro Ekutsanya kwaDanieri: Kutsanya kwekutanga kwaDaniel
2 Kutsanya kwemazuva makumi maviri nerimwe
3 Maitiro ekutsanya kwaDaniel?
4 Kutsanya kwakareba sei kwaDaniel?
Maitiro Ekutsanya kwaDanieri: Kutsanya kwekutanga kwaDaniel
Kutsanya kwekutanga kwakaitwa naDaniel, Hananias, Misael y Azariya, aifanira kurega kudya chikafu chamambo weBhabhironi. Vaingodya chete magidhi, magidhi uye mvura nguva yose yavakadzidziswa kushandira mambo.
Daniel akakumbira mvumo kuvakuru vake uye akaedzwa kwemazuva gumi kuratidza kuti kudya kwacho kwaisazokanganisa hutano hwake. Izvo zvakakodzera kuyeuka izvo Dhanieri akatarisa kuna Mwari, Danieri haana kutsanya kutarisana kana kudzora vamwe.
Achiratidza chimiro chake chakanaka, Dhanyeri akaenderera nekudya mukati memakore matatu ekudzidziswa mumuzinda weBhabhironi.
Negore rechitatu rokubata ushe kwaJehoyakimu mambo waJudha, Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi akasvika Jerusaremu, akarikomba.
Zvino Jehovha akapa Jehoyakimi mambo waJudha, nenhumbi dzeimba yaMwari, mumaoko ake; ndokuenda nazvo kunyika yeShinari, kuimba yamwari wavo, uye
Akaisa midziyo yacho muimba yepfuma yamwari wake.
Mambo akati kuna Ashipenazi, muchinda wavaranda vake, kuti vatore vana vaIsiraeri, vabve kumachinda amambo.
vakomana vasina chavanopomerwa, vakanaka, vakadzidziswa muuchenjeri hwese, vakachenjera pasainzi uye vanonzwisisa zvakanaka, uye
yakakodzera kuve mumuzinda wamambo; uye kuvadzidzisa mavara nemutauro wevaKadheya.
Mambo akarayira kuti vapiwe mumwe mugove wezuva rimwe nerimwe, kubva pazvokudya zvamambo, uye newaini yaainwa; uye kuti akavamutsa kwemakore matatu, zvekuti pakupera kwa
vaizoonekwa pamberi pamambo.
Pakati pavo paiva naDhanyeri, Ananiyasi, Misaeri naAzariya, vavana vaJudha.
These these the of gave gave gave gave gave gave names gave:::::: Daniel;; the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the kuna Ananiyasi, Shadreki; naMisaeri, naMesheki; uye kuna Azaria, Abhedhinego.
Zvino Dhanyeri akatsunga mumwoyo make kuti arege kuzvisvibisa nezvokudya zvamambo, kana newaini yaaimwa; akabvunza, saka, mukuru we
ngomwa kuti arege kumanikidzwa kuzvisvibisa.
Ipapo Mwari akanzwisa Dhanyeri unyoro netsitsi pamberi pomuchinda wavaranda.
mukuru wavaranda akati kuna Dhanyeri, Ndinotya ishe wangu mambo, akarayira zvamunofanira kudya nokumwa; zvakanaka mushure mekunge aona zviso zvako
Akapfava pane vakomana vakaita sewe, iwe uchapa mhosva musoro wangu kuna mambo.
Ipapo Dhanyeri akati kuna Meshari, akagadzwa mukuru wavaranda pamusoro paDanieri naAnaniasi naMisaeri naAzaria,
Ndinokumbira kuti muedze nemuranda wenyu kwemazuva gumi, uye mutipe miriwo tidye nemvura yekunwa.
Wobva waenzanisa zviso zvedu nezviso zvevakomana vanodya chikafu chamambo, wozoita nevaranda vako
Naizvozvo akatenda shoko ravo pamusoro pechinhu ichi, akavaedza mazuva ane gumi.
Uye pakupera kwemazuva gumi zviso zvavo zvakaratidzika kunge zvirinani uye zvine simba kupfuura zvevamwe vakomana vakadya kubva muchikamu chekudya.
Naizvozvo Meshari akatora mugove wavo wechikafu newaini yavaifanira kunwa, ndokuvapa muriwo.
Dhanieri 1: 1-16
Iwe uri kuverenga Maitiro Ekutsanya kwaDaniel
Kutsanya kwemazuva makumi maviri nerimwe
Kutsanya kwaDaniel kwemazuva 21 kunobva pane wechipiri kutsanya kwakaitwa nemuporofita Danieri muBhabhironi. Iwe unofanirwa kuzviziva kuti unzwisise maitiro ekuita iyo Danieri nekukurumidza.
Mukutsanya uku kwakatora mavhiki angangoita matatu, Danieri haana kudya nyama kana zvinhu zvinonaka uye aisanwa waini. Yakanga isiriwo pefiyumu panguva iyoyo. Pane ino nguva, Danieri akapedza mazuva makumi maviri nemana achichema achikumbira kuna Mwari.
Namazuva iwayo ini Dhanyeri ndakatambudzika vhiki mbiri;
Handina kudya chinonaka, kana nyama kana waini hazvina kupinda mumuromo mangu, kana kuzvizora mafuta kusvikira vhiki nhatu dzapera.
Dhanieri 10: 2-3
Kutsanya kwemazuva makumi maviri nemasere kwakave kwakakurumbira uye nhasi tinowana mafomula akasiyanasiyana e "Daniel Fast". Izvo zvinogona kuoneka mukutsanya uku kwemazuva makumi maviri ndezvekuti Danieri akazvidzora pakudya uye zvinofadza zvinhu senzira yekutsvaga Mwari.
Kutsanya hakuna chinangwa, uye haifanire kunge iri nzira yekuzviratidza "mutsvene" kupfuura vamwe.. Chinangwa chekutsanya kutsvaga kushamwaridzana naMwari, kuzviita mutsvene, nekusimbisa kutenda kwako munaKristu.
Kana chinangwa chako chiri chekudzikira uremu, enda pakudya. Kana chako chinangwa chiri chekutsvaga Humambo hwaMwari, kutsanya.
Maitiro ekutsanya kwaDaniel?
Iko hakuna chaiyo mitsara muBhaibheri yekutsanya kusarura. Munhu wega wega anofanira kusarudza zvekusadya, kunwa kana kuita panguva yekutsanya. SaDaniel, zvimwe zvinonaka zvekudzivisa zvinosanganisira:
Zvinwiwa zvisina doro
Zvimwe zvinhu zvaunoda
Pamusoro pechikafu, iwe unogona zvakare kutsanya kubva kune zvimwe zvinonakidza zviitiko, senge:
Kuvaraidza (TV, cinema, mitambo ...)
Zvepabonde (nemvumo yemurume / mukadzi)
Chenjerera! Nokukurumidza sezvaunogona. Ona zvaunogona kuita zvichibva pahutano hwako uye mamiriro emhuri. Haufanire kurega zvese izvi zvinhu, asi ita chitsidzo chekurega chimwe chinhu.
Shandisa yako yemahara nguva yekutsanya kunamata, kuverenga Bhaibheri, uye kutsvaga kutungamirirwa naMwari. Ndicho chinangwa chekutsanya. Pakati pekusagadzikana kwepanyama kwekutsanya, tsvaga nyaradzo muShoko raMwari.
Kutsanya kwakareba sei kwaDaniel?
Vanhu vazhinji vanotevedzera muenzaniso waDanieri uye vanotsanya mukati 21 mazuva. Asi kutsanya kunogona kutora zvese nguva yaunofunga, maererano nekuda kwaMwari. Kana iwe uchifunga kuti zvirinani kuzviita kwenguva shoma, hazvina kushata. Kana iwe uchida kuwedzera icho, hapana dambudziko futi.
Namata uye sarudza nguva yekutsanya. Kana panguva yekutsanya iwe uchinzwa kubva kuna Mwari kuti unofanira kumira kana kuwedzera nguva yacho, teerera Mwari. Chinhu chakanyanya kukosha pakutsanya kutevedzera zvinodiwa naMwari uye kwete chete zvinangwa.
Mwari vachakuropafadza panguva yekutsanya. Hatigone kuziva chaizvo zvichaitika panguva iyoyo, asi Mwari achaita zvinoenderana nezvinodiwa. Ani naani anotsvaga Mwari anomuwana.
Izvi ndizvo zvazviri! Tinovimba chinyorwa ichi chakubatsira kuti unzwisise maitiro ekuita Danieri nekukurumidza chaizvo. Kana iwe ikozvino uchida kuenderera mberi nekudzidza dzidziso dzechitendero uye kuziva ndedzipi dziri mhedzisiro yechivi, ramba uchivhura Ziva.online.